ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြUseနာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုကုသသည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်စဉ်းစားချက်များ (၂၀၁၈) ။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုပုံစံကိုသုံးသပ်ခြင်း) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြIndနာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုကုသသည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း (၂၀၁၈) ။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 , Volume ကို 48, ပြ2နာ ၂, စစ 431-435 |
ရှိန်ဒဗလျူ Kraus, ပက်ထရီရှာဂျေ Sweeney
Grubbs, ပယ်ရီ, အလိုရှိနှင့်ရိဒ် (2018aကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း (PPMI) ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လူတစ် ဦး ချင်း၏ပြproblemsနာများကိုနားလည်ရန်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အတိအကျဆိုရလျှင်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့၏အပြုအမူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတန်ဖိုးများ (ဥပမာကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု) နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခများနှင့်အခြားပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသည်ဟုဆိုကြသည်။ ယခင်သုတေသနသည်ဤအဆိုပြုထားသောပုံစံ (Grubbs, Exline၊ & Lindberg, 2017; Grubbs, Wilt, Exline, Pargament, & Kraus, 2018b; သော့ခ်, သောမတ်စ်, Sosin, ယာကုပ်, & Moen, 2016).
သူတို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ Grubbs et al ။ (2018a) ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်နှစ်ခုလမ်းကြောင်းအဆိုပြုထား။ လမ်းကြောင်း 1 ကြောင်းညစ်ညမ်း-related ပြဿနာများ dysregulation (ဆိုလိုသည်မှာ compulsive အသုံးပြုမှု) ကြောင့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လမ်းကြောင်း2ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ကြောင့်ညစ်ညမ်းပြဿနာများကိုဖော်ပြထားတယ်ဖော်ပြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးလမ်းကြောင်းကျနော်တို့ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖြေရှင်းရန်အရေးပါသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်သဘောတူထားတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အလေ့အကျင့်တှငျကြှနျုပျတို့ရောက်သောသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ပြီ, စိုးရိမ်စိတ်, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်ပေါင်းစပ်များမှမကြာခဏအကူအညီရှာကြံ client များအတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်ရန်သောသူတို့အားအပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်သင့်လျော်သောကုသမှုအကြံပြုချက်များပေးနိုင်ရန်အတွက် "porn စွဲ," ကျနော်တို့သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ဖို့ဒီဂရီကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အများကြီး clients များပုံမှန်ဖြစ်သွားပါသို့မဟုတ်အပြုအမူကြဉ်ရှောင်, သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကနေအပျက်သဘောသို့မဟုတ်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ကနေနည်းနည်းအပျော်အပါး deriving ရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်မြောက်မြားစွာပျက်ကွက်အားထုတ်မှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအစီရင်ခံစာသိသိသာသာဒုက္ခခံရသောပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုရှာကြံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
compulsive လိင်အပြုအမူ (CSB) ပတ်ပတ်လည်ရောဂါရှာဖွေမူဘောင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း (Kraus, Voon, & Potenza, 2016b) ။ CSB Carnes (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအဖြစ် conceptualized ခဲ့ပြီး, 2001), hypersexuality (Kafka, 2010), လိင်စိတ်ထကြွလွယ်သော (Bancroft & Vukadinovic, 2004) သို့မဟုတ်အမူအကျင့်စွဲ (Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ အငြင်းအခုန်တိုးတက်လာခဲ့သည်နှင့်အမျှကျနော်တို့သုတေသီများ (တခုတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ကြီးပြင်းစိုးရိမ်မှုများတန်ဖိုးထားကြပါပြီ, 2013; ဆောင်းရာသီ, 2010မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၌အလွန်အကျွံရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုထိတွေ့ခြင်း၏အလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍၊ အပြုအမူပုံစံများ (သို့) မကြာခဏလိင်လုပ်ဆောင်မှုများသည်ပြproblemနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောအပိုဆောင်းရည်မှန်းချက်ညွှန်းကိန်းများရှိနေခြင်းကိုရှာဖွေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ (Kraus, Martino, & ပိုတက်စန်၊ 2016a).
Kraus et al အားဖြင့်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း။ (2018)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င် CSB အတွက်တိကျသောရောဂါရှာဖွေရေးမူဘောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်ခိုင်မာသည့်အချက်အလက်များနှင့်ထပ်မံသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည် (Gola & Potenza, 2018; ဝေါ်လ်တန် & ဘူလာ, 2018) ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ Grubbs et al နှင့်အတူသဘောတူသည်။ (2018a) ညစ်ညမ်းမှရိပ်မိစွဲလမ်း၏လက်ရှိနားလည်မှုယခင်လေ့လာမှုများကတည်းကယဉ်ကျေးမှုန့်အသတ်အဓိကအားဖြင့်အများစုနေထိုင်ပြီးခရစ်ယာန်နမူနာအတူအနောက်တိုင်း, စက်မှုနိုင်ငံများရှိရာအရပျကိုယူလိုက်ပါတယ်။ ဤသည်ကတခြားယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအနေဖြင့်စံချိန်စံညွှန်း, တန်ဖိုးကိုစနစ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အတှေ့အကွုံပုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ကောင်းစွာလေ့လာအနောက်တိုင်း Judeo-ခရစ်ယာန်အမြင်များနှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကနေကွဲပြားစေခြင်းငှါကတည်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတ်မှတ်နှင့်ကုသဘယ်လိုပြဿနာများအတွက်စဉ်းစားရန်သိသိသာသာန့်အသတ်ဖြစ်ပါသည် ။ ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုအပေါ်ထပ်မံသုတေသနအဖြေရှာတဲ့စံတိကျပေမယ့်လည်းယဉ်ကျေးမှုကိုဖြတ်ပြီးဘာသာပြန်ချက်များကိုသာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပါသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder (CSBD): Differential Diagnosis များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား
မကြာသေးမီကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (2018) ၏လာမည့် 11th edition အတွက် CSBD အပါအဝင်အကြံပြု ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (6C72) ။ တစ်ဦးကရှေးရိုးစွဲချဉ်းကပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်နှင့်သုတေသနအထောက်အထားများကိုသေးတစ်ခုစွဲလမ်းအပြုအမူကြောင့်အဆိုတင်သွင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CSBD တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ် CSBD စံအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
CSBD သည်ပြင်းထန်သော၊ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောတွန်းအားများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်သောပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးစီးပွားများ၊ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်တာ ၀ န်များကိုလျစ်လျူရှုသည့်အထိလူ၏ဘဝကိုအဓိကအာရုံစိုက်ရာရောက်သည်။ အထပ်ထပ်လိင်အပြုအမူသိသိသာသာလျှော့ချရန်မအောင်မြင်အားထုတ်မှုမြောက်မြားစွာ; ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိသော်လည်း၎င်းမှစိတ်ကျေနပ်မှုအနည်းငယ်သာရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆက်လက်ပြုမူသည်။ ပြင်းထန်သော၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်မှုပုံစံနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ (ဥပမာ - ၆ လနှင့်အထက်) တွင်ပြသခြင်းနှင့်သိသိသာသာစိတ်သောကရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်၏အခြားအရေးကြီးသောဒေသများ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၊ တိုက်တွန်းချက်များသို့မဟုတ်အပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝမသက်ဆိုင်သောဘေးဒုက္ခသည်ဤလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီရန်မလုံလောက်ပါ (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ 2018).
CSBD ၏အမာခံများ (Kraus et al "CSBD တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုခိုင်လုံပါဘူးသူ့ဟာသူကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ" လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်စေသည်တရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်နှိမ်နင်းရန်ပျက်ကွက်ကြိုးစားမှုထပ်ခါတလဲလဲနှင့်နေသည်။ , 2018, p ။ 109) ။ ဤရွေ့ကားမဆိုအောင်မြင်သောကိစ္စတွင်စိတ်ကူးနှင့်ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုများအတွက် key ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများစေ့စေ့စပ်စပ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သော differential ကိုရောဂါနှင့်အတူစတင်ဘယ်မှာလက်တွေ့လက်တွေ့တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်အချက်များဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ပုံထဲမှာ algorithm ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ 1 Clinician ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူတင်ပြ client များအတွက်ရောဂါနှင့်ကုသမှုချဉ်းကပ် conceptualize ကူညီဖို့ရန်။
နားလည်မှုကူညီနိုင်ရန်, ယခုကြှနျုပျတို့တစ်ခုစစ်ပြန်ရေးရာဦးစီးဌာန (VA သို့) ပြင်ပလူနာစိတ်ကျန်းမာရေးအထူးဆေးခန်းများတွင်ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုရှာသောသူအစစ်အမှန်ဖောက်သည်ဥပမာသုံးခုကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ ဥပမာအားလုံးခဲ့ကြသည့်ဖောက်သည်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာဖယ်ရှား-ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကုသမှု algorithm ကို
PPMI နှင့် CSBD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်း
Mr. S သည်ကောလိပ်တက်နေစဉ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်သူအသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်တွင်ရွယ်တူချင်းလိင်တူဆက်ဆံသူတစ် ဦး တည်းသောယောက်ျားဝါရင့်ဖြစ်သည်။ သူသည် VA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတွင်စိတ်ဒဏ်ရာအလွန်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ကိုကုသနေသည်။ Mr. S သည်သူမအား“ porn and sex စွဲလမ်းသူ” အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသောကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ သူကနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်တယ်။ သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအပြင်အသိအကျွမ်းများနှင့်ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်ကြိုးစားခြင်းမြောက်မြားစွာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Mr. S သည်မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသော ev ၀ ံဂေလိခရစ်ယာန်တစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကသူအား“ ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော” နှင့်“ အပြစ်ရှိသောသူ” များဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Mr. S သည် CSBD အားအတိတ်ကကုသမှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်းသူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိအမျိုးသားများအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ရန်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဆေးခန်းရဲ့စားသုံးမှုအတွင်းအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မစ္စတာ S ကို၏တုံ့ပြန်မှုပုံထဲမှာအလယ်လမ်းကြောင်း၏လမ်းကြောင်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ 1။ မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသူ၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များနှင့်အတူ align မပြုခဲ့ကတည်းကသူ PPMI ထောက်ခံ။ သူ့သမိုင်းနှင့်လက်ရှိပြဿနာများ၏အစီရင်ခံစာအားဖြင့်သူလည်း CSBD များအတွက်အပြည့်အဝစံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲမစ္စတာ S ကတစ်ခုတည်းကိုသာမိမိအဘုရားကျောင်းမှတဆင့်အကူအညီတောင်းရှာကြံ၌သူ၏အကျိုးစီးပွားပေးထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးခန်းနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲကုသမှုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ပါဘူး။ အချိန်မတန်မီရပ်စဲမတိုင်မီကမစ္စတာ S ကိုများအတွက်ကုသမှုအကြံပြုချက်များသည်သူ၏တဏှာဖြေရှင်းရန်ဆေး (naltrexone) မညွှန်ကြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသူ၏ compulsive အသုံးပြုမှုအတွက်ရလဒ်ကြောင့်အခြေခံယုံကြည်ချက်များနှင့်အပြုအမူဖြေရှင်းရန်သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံးပေးပါဝင်သည်။
သာလျှင် CSBD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်း
Mr. D သည်ကော့ကေးဆပ်၊ လိင်ကွဲလိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူအမျိုးသားဖြစ်ပြီးအသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်တွင်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုသမိုင်းကြောင်းနှင့်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမှန်မှန်စတင်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်သူ၏ဇနီးအလုပ်သွားသည့်အချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်သူမနှင့်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသော်လည်းသူ၏ဇနီးနှင့်ကျေနပ်လောက်သောလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ မစ္စတာဒီသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမဖွယ်မရာပြုမှုအဖြစ်ဖော်ပြပြီး၎င်းမှကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ရက်ပေါင်းများစွာဆင်းရဲမွဲတေမှုများပြီးနောက်သူသည်သူကိုအသုံးပြုရန်အစပျိုးခဲ့သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။
ဆေးခန်းရဲ့စားသုံးမှုစဉ်အတွင်းမစ္စတာ: D ကြောင့် PPMI ဖို့ဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့နေရထောက်ခံသော်လည်းသူ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်အတွေ့အကြုံကိုအခက်အခဲများလုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့ပါဘူး။ သူကအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပုံတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အဖြစ် CSBD များအတွက်အပြည့်အဝ ICD-11 စံတွေ့ဆုံရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ 1။ မစ္စတာဒီကိုဆေးဝါး (naltrexone, ၅၀ မီလီဂရမ် / တစ်ရက်) သတ်မှတ်သည်။ သူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်သိမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံး၏တစ် ဦး ချင်းစီအစည်းအဝေးများတွင်လည်းပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ကုသမှုပြုစဉ်မစ္စတာဒီသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားလျော့ချကာသူ၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သူသည်ဇနီး၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအပျော်သဘောလှုပ်ရှားမှုများတွင်တိုးမြှင့်ခြင်း၊
သာလျှင် PPMI နှင့်အတူတစ်ဦးချင်း
မစ္စတာဇသည်အသက် (၄၀) ကျော်တွင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကော့ကေးဆပ်၊ လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူစစ်မှုထမ်းဟောင်းဖြစ်သည်။ သူသည်အလုပ်ရှိပြီးကလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ Mr. Z သည်စိတ်ဓာတ်ကျမှုသမိုင်းကြောင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်သူ၏လက်ရှိဇနီးအပါအ ၀ င်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များနှင့်ပconflictsိပက္ခများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်။ သူသည်သူမဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်အချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်းသူသည်သူမနှင့်နှစ်အတော်ကြာကတည်းကကိုယ်ထိလက်ရောက်မရင်းနှီးကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုလေ့လာသော်လည်းရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ရန်အခက်အခဲမရှိကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ၌လိင်မှုဆိုင်ရာအခြားထွက်ပေါက်မရှိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခဲ့သော်လည်းသူ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေတွင်အမျိုးသားများမည်သို့ပြုမူသင့်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်သူသည်“ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်” နှင့်“ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်” ခံစားရသည်။ သူသည်အလွန်စိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးသူ၏တန်ဖိုးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားကွဲလွဲမှုအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ဆေးခန်းရဲ့စားသုံးမှုစဉ်အတွင်းမစ္စတာ Z ကိုသူမပြုမီဤပြဿနာများအတွက်ကုသမှုဘယ်တုန်းကမှမရှာခဲ့ပါဘူးဖော်ပြထားသည်။ သူကြောင့် PPMI မှရောက်သောပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများထောက်ခံနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်နှစ်ခုလုံးအတွက်ရောဂါရှာဖွေစံတွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့်ပုံအတွက်ကိုယ်စားပြုအဖြစ် CSBD မဟုတ်ပါဘူး။ 1။ တစ်ဦးချင်းကုထုံးသူ၏ဇနီးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏စတင်နှင့် ပတ်သက်. မစ္စတာ Z ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်လျှော့ချအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ မစ္စတာ Z နဲ့သူ့ဇနီးလည်း၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်နေစဉ်ကုထုံးလုပ်ဖို့စုံတွဲတို့အတွက် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျြောမှေ့စလှုပ်ရှားမှုများတာဝန်ပေးအပ်ဘယ်မှာစုံတွဲများကုထုံးပါဝင်ခဲ့။ သူနဲ့သူ့ဇနီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးပြန်လည်စတင်သည့်အခါမစ္စတာ Z ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူလည်းသူ့ဇနီးနှင့်အတူတိုးပွားလာဆက်သွယ်ရေးအစီရင်ခံအဖြစ်နောက်ပိုင်းတွင်ကုသမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်သည့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားသည်။
ဒီ Commentary နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုရှာကြံ client များအတွက်ရောဂါရှာဖွေထည့်သွင်းစဉ်းစား ပတ်သက်. လိုအပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆက်လက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Grubbs et al အားဖြင့်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း။ (2018aပြ,နာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူတစ် ဦး သည် CSBD အတွက် ICD-11 စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရာတွင်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုခေါင်းစဉ်သည်သက်ဆိုင်သည်။ သက်သေအထောက်အထားများအရအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမှသိသာထင်ရှားသည့်ပြissuesနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ (Kraus, Potenza, Martino, & Grant,) တွင်သိသိသာသာစိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 2015b) ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် CSBD ၏ဖြစ်နိုင်သောပါဝင်နှင့်များစွာသောအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုပိုပြီးလူတွေအနာဂတ်မှာပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုကိုရှာကွလိမျ့မညျဟုမြျှောလငျ့။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာသော CSBD များအတွက်စံတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အကူအညီရှာကြံများအတွက် client များ '' ဆုံးဖြတ်ချက်များနောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်းများကိုနားလည်သင့်လျော်စွာ client များအတွက်တိကျရောဂါနှင့်ကုသမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာအတွက်အရေးကြီးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏နမူနာများကမီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏သဘောသဘာဝကိုခွဲခြားသိရန်လိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပြproblemနာကိုအသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င် CSB အတွက်ကုသမှုများစွာကိုတီထွင်ပြီးဖြစ်သည်။ ပဏာမသက်သေအထောက်အထားသိမြင်မှုအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံး (Hallberg, Kaldo, Arver, Dhejne, & Öberg) ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ 2017), လက်ခံမှုကတိကဝတ်ကုထုံး (Crosby & Twohig, 2016) သို့မဟုတ်သတိ -based ချဉ်းကပ်မှု (Brem, Shorey, Anderson, & Stuart, 2017; Reid, Bramen, Anderson, & Cohen, 2014) ။ ထို့အပြင်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကြား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်အထောက်အထားအချို့ရှိသည် (Gola & Potenza, 2016; Klein, Rettenberger & Briken, 2014; Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015a; Raymond, Grant, & Coleman, 2010) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုဥပမာနှင့်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။ 1, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ clients များအကူအညီနဲ့ရှာကြံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားလက်တွေ့တင်ပြချက်များနှင့်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, အနာဂတ်သုတေသနသင့်လျော်စွာညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုအခြေခံပြဿနာများကို၏ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေရှင်းရန်ကြောင်းကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းဟာစစ်ပြန်ရေးရာဦးစီးဌာန, စစ်ပြန်ကနျြးမာရေးညွှန်ကြားမှု, VISN 1 နယူးအင်္ဂလန်စိတ်ရောဂါသုတေသန, ပညာရေးနှင့်လက်တွေ့ရေးစင်တာတို့ကထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
စာရေးသူမှာလက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဖော်ရန်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပဋိပက္ခများကိုရှိသည်။ ဖော်ပြအမြင်များစာရေးသူ၏ရှိသူများဖြစ်ကြပြီးသေချာပေါက်စစ်ပြန်ရေးရာဦးစီးဌာန, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏အနေအထားသို့မဟုတ်မူဝါဒကိုထင်ဟပ်ကြပါဘူး။
ဝါရင့်ရေးရာဦးစီးဌာနတို့ကလိုအပ်သောအဖြစ်အားလုံးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်စာရေးသူမဆိုအားဖြင့်ဖျော်ဖြေလူ့သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူမည်သည့်လေ့လာမှုများဆံ့မခံပါဘူး။ de-ဖော်ထုတ်ကိစ္စတွင် Vignette ၏အသုံးပြုမှုကိုသာလေ့ကျင့်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Bancroft, ဂျေ, & Vukadinovic, Z. (2004) ။ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သီအိုရီမော်ဒယ်တစ်ခုဆီသို့။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 41(3), 225-234 ။CrossRefGoogle Scholar
Brem, MJ, Shorey, RC, Anderson တို့, အက်စ်, & စတူးဝပ်, GL (2017) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်လူနေအိမ်ရာကုသမှုတွင်အမျိုးသားများအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သတိ, 8(6), 1552-1558 ။CrossRefGoogle Scholar
Carnes, P. (2001) ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက: နားလည်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ။ နယူးယောက်: Hazelden ထုတ်ဝေရေး။Google Scholar
Crosby, JM, & Twohig, အမတ် (2016) ။ ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်လက်ခံခြင်းနှင့်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းကုထုံး - ကျပန်းကျပန်းစမ်းသပ်ခြင်း။ အပြုအမူကုထုံး, 47(3), 355-366 ။CrossRefGoogle Scholar
Gola, အမ်, & Potenza, အမ် (2016) ။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကို Paroxetine ကုသမှု - အဖြစ်အပျက်စီးရီး။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 5(3), 529-532 ။CrossRefGoogle Scholar
Gola, အမ်, & Potenza, MN (2018) ။ ပညာရေး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာအစပျိုးခြင်းများကိုမြှင့်တင်ခြင်း - အပေါ်မှတ်ချက် - ICD-11 တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမမှန်ခြင်း (Kraus et al ။ , 2018) ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 7(2), 208-210 ။CrossRefGoogle Scholar
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Volk, F. , & Lindberg, MJ (2017) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဘာသာရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46(6), 1733-1745 ။CrossRefGoogle Scholar
Grubbs, JB, ပယ်ရီ, SL, Wilt, JA, & ရိဒ်, RC (2018a) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Grubbs, JB, Wilt, JA, Exline, JJ, Pargament, KI, & Kraus, SW (2018b) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု - လောင်ဂျီတွဒ်စစ်ဆေးခြင်း။ စွဲလမ်း, 113(3), 496-506 ။ https://doi.org/10.1111/add.14007.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Hallberg, ဂျေ, Kaldo, V. , Arver, အက်စ်, Dhejne, C တို့, & Öberg, KG (2017) ။ hypersexual ရောဂါများအတွက်တစ် ဦး ကသိမြင် - အပြုအမူကုထုံးအုပ်စုတစ်စုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု: တစ် ဦး ကဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 14(7), 950-958 ။CrossRefGoogle Scholar
Kafka, အမတ် (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39(2), 377-400 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-009-9574-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Klein, V. , Rettenberger, အမ်, & Briken, P. (2014) ။ hypersexuality ၏သူကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ညွှန်းကိန်းများနှင့်၎င်းသည်အွန်လိုင်းမှအမျိုးသမီးနမူနာများတွင်ဆက်စပ်မှုများရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 11(8), 1974-1981 ။CrossRefGoogle Scholar
Kor, အေ, Fogel, Y. , Reid, RC, & Potenza, MN (2013) ။ hypersexual Disorder ကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သလား။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 20(1-2), 27-47 ။ https://doi.org/10.1080/10720162.2013.768132.CrossRefGoogle Scholar
Kraus, SW, Krueger, RB, Briken, P. , ပထမဦးစွာကို MB, Stein, DJ သမား, Kaplan, က MS ... ရိဒ်, GM က (2018) ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 1, 109-110 ။ https://doi.org/10.1002/wps.20499.CrossRefGoogle Scholar
Kraus, SW, Martino, S. , & Potenza, MN (2016a) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများ၏လက်တွေ့လက္ခဏာများ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 5(2), 169-178 ။ https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.036.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Kraus, SW, Meshberg-Cohen, အက်စ်, မာတီနို, အက်စ်, ကွီနုန်း၊ LJ, & Potenza, MN (2015a) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 172(12), 1260-1261 ။ https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15060843.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Kraus, SW, Potenza, MN, Martino, S. , & Grant, JE (2015b) ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများ၏နမူနာတွင်ယေးလ် - ဘရောင်းလေ့ကျင့်ခန်း - သံသရာဆိုင်ရာစိတ်ပညာ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 59, 117-122 ။ https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.02.007.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Kraus, SW, Voon, V. , & Potenza, MN (2016b) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စွဲလမ်း, 111, 2097-2106 ။CrossRefGoogle Scholar
တခု, C. (2013) ။ Hypersexual ရောဂါ: ရှင်းလင်းပြတ်သားရှာဖွေနေသည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 20(1-2), 48-58 ။Google Scholar
Raymond, NC, Grant, JE, & Coleman, အီး (၂၀၁၀) ။ compulsive လိင်အပြုအမူကုသရန် naltrexone နှင့်အတူတိုးပွား: အမှုစီးရီး။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ရာဇဝင်, 22(1), 56-62 ။PubMedGoogle Scholar
Reid, RC, Bramen, JE, Anderson, အေ၊ & Cohen, MS (၂၀၁၄) ။ hypersexual လူနာများအကြားသတိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု proneness ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70(4), 313-321 ။CrossRefGoogle Scholar
Volk, အက်ဖ်, သောမတ်စ်, ဂျေ, Sosin, အယ်လ်, ယာကုပ်, V. , & Moen, C. (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများအတွက်ဘာသာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်ကွဲခြင်း - အမှတ်စဉ်ဖျန်ဖြေခြင်းပုံစံ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 23(2-3), 244-259 ။CrossRefGoogle Scholar
ဝေါ်လ်တန်, MT, & Bhullar, N. (2018) ။ တွန်းအားပေးထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အပြုအမူဆိုင်ရာလိင်အပြုအမူ: ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများဒေတာ [Editor ကိုမှပေးစာ] စောင့်ဆိုင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 47, 1327-1331 ။CrossRefGoogle Scholar
ဆောင်းရာသီ, ဂျေ (2010) ။ Hypersexual ရောဂါမြား: A ပိုပြီးသတိထားချဉ်းကပ်မှု [Editor ကိုမှပေးစာ] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39(3), 594-596 ။CrossRefGoogle Scholar
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2018) ။ သေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါစာရင်းဇယားများအတွက် ICD-11။ ဂျီနီဗာ: စာရေးသူ။Google Scholar